Information Technology - Saturngod
IT , IT ဆိုပြီး ခေတ်စားလာသလို IT သမားတွေပေါ်လာသလို IT ကို လေ့လာနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေလည်း တချိန်တခါတုန်းက သွင်သွင်ကြီး သုံးခဲ့ကြတာ မှတ်မိသေးပါရဲ့။ IT ဆိုတာက ဘာလဲလို့ဆိုရင် Information Technology ပါပဲ။ အရင်တုန်းက IT နဲ့ programming ဘာဆိုင်လို့လဲ။ web development နဲ့ IT နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။ IT လို့ ပြောပြီး programming တွေ လေ့လာ web site ဆွဲတာတွေကို လေ့လာ။ နောက်ပြီးတော့ ဘာလို့ IT ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးတပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို လုံးလုံးကြီးကို မသိခဲ့တာ အမှန်ပါ။ အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိလာတော့မှပဲ IT ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နားလည်လာတော့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တုန်းက ကို ရဲမြတ်သူ ပြောဖူးတယ်။ Information Technology ဆိုတာ Technology ကို သုံးချပြီး information တွေ ဖလှယ်တာပဲတဲ့။ အဲတုန်းက သိသလို ရှိပေမယ့် သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ။ တခြား အပိုင်းတွေတော့ သေချာမသိပေမယ့် IT ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခဏ မေ့ထားပြီး Web အပိုင်းကို တချက်ကြည့်ရအောင်။
လက်ရှိ အောင်မြင်နေတဲ့ Website တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် facebook , twitter , LinkedIn, Google , digg, reddit စတာတွေက data တွေပဲ။ တနည်းပြောရင် information တွေပဲ။ တခြားသူမှာ ရှိတဲ့ information ကို technology သုံးပြီး အခြားတစ်ယောက်ဆီမှာ သွားပြတယ်။ နောက်ကွယ်က technology တွေ server တွေ ကို ခဏ လောက် မေ့ထားပြီး အပေါ်ယံလေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်ရင် information တွေပဲ။ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် information တွေလား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခြားသူ information တွေကို အခြားတစ်ယောက်ဆီကို သူတို့ technology သုံးပြီး ပို့ပေးတာ။ PHP က information တွေ မဟုတ်ဘူး။ Python က information တွေ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ် language က information တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
IT , IT ဆိုတာ လူတိုင်း ပါးစပ်ဖျားမှာ ပြောနေကြတယ်။ IT ပွဲတော် ဆိုပြီး ဈေးတွေ ရောင်းနေကြတယ်။ IT ပွဲတော်ဆိုပြီး game တွေ ပြိုင်ကြတယ်။ IT ဆိုတာကို ဘယ်လို ခံယူထားလဲတော့ မသိ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ IT ဆိုတာက Information Technology ။ Technology အားကိုးနဲ့ information တွေကို အသုံးချနေတာပဲ။ နည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး လူတွေ လိုချင်တဲ့ information တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွယ်လွယ်ကူကူ ထိထိရောက်ရောက် ပို့ပေးတာပဲလို့ မြင်တယ်။
« Node.js manual routing KeyMagic Unicode Keyboard for iOS »
whatafreaky truth. most ppl forget about what they stand for . yep the best thing we should also need to learn is how to use Information and technology effectively and take advantage on it for money 😀
IT ပွဲဆိုတာနဲ့တော်တော်များများ ထင်တာက လက်တော့ တွေ…ကွန်ပျူတာတွေ ဝယ်လို့ရတဲ့ ပွဲလို့ဘဲမြင်နေကြတယ်။
အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်တန်းတွေ တက်ခဲ့တုန်းကလည်း သင်တန်းတွေက Technology တွေကိုဘဲသင်ပေးပီးတော့ Information ကိုမသင်ပေးတော့လည်း အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာဘဲ…။
စကားမစပ်…ကျွန်တော်ပြောထားတာလေးလုပ်ပေးပါ ဦးဗျ..။ 😀
Yes. Ko Saturngod. All of the IT men wanna to start ASP.Net , PHP but they dunn know HTML is the main.
But I think, now you already know about IT. Before when are you study IT,you don’t know nothing. Now your experience and practice is mature. So that you began to know more and more.
Myanmar have so many people don’t know about IT(IT word is very big among myanmar).
So,sometimes you should be write easily, normally and basically.
Ok bro! Let’s me stop about here.
အဆောက်အဦးတစ်ခုဆောက်ရင်တောင် အုတ်မြစ်ခိုင်မှ အဲ့အဆောက်အအုံကတည်တံ့တာ။ မဟုတ်ရင်တော့ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တာနဲ့ဘာမှကွာမဟုတ်ဘူး။ သင်သာသင်၏ မရ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
Node.js manual routing